ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - THE INDIAN FACE
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ်က The Indian Face®ဖက်ရှင်နယ်ပယ်သို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အားကစားသမားများ၊ စွန့်စားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အတွေးအခေါ်ကိုလိုက်လျှောက်လိုသူအားလုံးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောထုတ်ကုန်များကိုဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်အားထက်သန်သောအားကစား၊ ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ကြောင်းပြောရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ The Indian Face သူတို့က ငါတို့အတွက် ပြောစရာရှိတယ်။ အရည်အသွေး၊ အသုံးအဆောင်နှင့် ဒီဇိုင်းများသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်ရန် အတူတကွ ပါ၀င်လာသောကြောင့် ဤနည်းအားဖြင့် သင့်အတွက် သိမ်းဆည်းထားသော စွန့်စားခန်းများအားလုံးတွင် သင့်နှင့်အတူ လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်။ အခု ငါတို့ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုက ဘယ်ကလာတာလဲ။ ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့- ငါတို့ကို ဆက်ဖန်တီးဖို့ ဘယ်အရာက တွန်းအားပေးတာလဲ။
The Indian Face ၎င်းသည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒါထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ ၎င်းသည် လှုပ်ရှားမှု၊ adrenaline၊ စတိုင်၊ အားကစား၊ တက်ကြွမှုနှင့် တိုးတက်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 15 နှစ်ကျော်ကြာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးတက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုက သင့်အတွက် သီးသန့်ဖန်တီးထားသော စုစည်းမှုများဖြင့် ရဲရဲတောက်တောက်ဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် သင်လိုလူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်- လူနေမှုဘ၀နှင့် မြို့ပြပုံစံကို နှစ်သက်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားမှ ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမဆုံး အလောင်းအစားပြုလုပ်သည့် ထိုထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်က ပိုပါတယ်။ အိန္ဒိယ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခြားအရာအားလုံးထက် သာလွန်သူအဖြစ် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ ဖော်ပြလိုသော ဆန္ဒရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဒီလိုလူတွေရှိဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ဒီလိုပါပဲ… သူတို့ ပေါင်းစည်းတဲ့အခါ ထူးခြားတဲ့ “တစ်ခုခု” အမြဲပေါ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုကြီးရှိတာနဲ့ တူပါတယ်။
မသိသော US သို့သွား:
စွန့်စားခန်းသို့စတင်ခြင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှဖိနှိပ်ခြင်းမဖြစ်စေလိုသောတွန်းအားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားအရည်အသွေးမြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဘာမျှမတားဆီးနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးအရာက အရာအားလုံးကို ပေးကမ်းနေရတာပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရာအားလုံးကို ပေးဆောင်ခြင်းမပြုလျှင် အသက်ရှင်ခြင်း၏အသုံးမှာ အဘယ်နည်း။ အိပ်မက်တွေကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ရင် အိပ်မက်မက်ဖို့ ဘာကိုသုံးမလဲ။ မညှစ်ထုတ်ရင် ဘယ်အချိန်ကောင်းလဲ။ နောင်တရရန်၊ အနားယူရန် သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်ရန် အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်... သို့သော် ယခုမဟုတ်သေးပါ။ အပြင်ထွက်ပြီး အလံတစ်ခုအနေနဲ့ ဆောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ တက်ကြွမှုက ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရှေ့ကို ဆက်သွားဖို့ အမြဲတမ်း လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် အရာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်ရခြင်းသည် ကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး လူအများက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောသည့်အရာကို အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဒါ ငါတို့နောက်က လိုက်နေတာ မဟုတ်လား။ ပျော်ရွှင်မှုလား?
ဤအရာဖြင့် သင့်အတွက် အသစ်အဆန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အားကစားသည် ဘဝ၏ အကြီးမားဆုံးသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါက အမှန်ပဲ! ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွင်း မည်သည့်အသိုင်းအဝန်းတွင်မဆို၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းတို့ကို နှစ်သက်သူများ၊ ကွဲပြားသောအရသာများပင်လျှင် တူညီသောအကြံဥာဏ်ကို အတူတူရရှိကြသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် 100% အားကစားချစ်သူများ! တစ်နေရာရာကို ရှာတွေ့ခြင်းသည် လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး စိတ်ပျက်စရာပင်။ ငါဘယ်သူလဲ? ငါဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ငါဘယ်သွားနေတာလဲ ကောင်းပြီ၊ အဲဒီ စိတ္တဇနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ မကွဲလွဲတဲ့ မေးခွန်းတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားကစားလုပ်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို လွတ်မြောက်စေပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုစိတ်အေးလက်အေး အေးဆေးသောရှုထောင့်မှ ရင်ဆိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည် အမြဲတစေ၊ အသေးဆုံးအရာများကို ခံစားရန်၊ အချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကို တန်ဖိုးထားကာ အိပ်မက်များလက်မလွတ်စေဘဲ လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထားခဲ့သင့်သည်။ အိပ်မက်တွေမရှိရင် ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ The Indian Face!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝါသနာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ သင့်အား သယ်ဆောင်သွားမည့် ဘဝဆီသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်အားလုံးကို အမြဲတမ်း ပို့လွှတ်လိုပါသည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အရာရာတိုင်းက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းနေတာပါပဲ။ လာနေတာလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြစ်များကိုကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအိန္ဒိယလူမျိုးများဟုခံစားရသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာရှနှင့်သမုဒ္ဒရာရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်မှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။